Simulateur fianarana ny elanelana misy eo amin'ny firazanana - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
Enga anie 31, 2021 fandaharam-pianarana 0
Ny mofo ho an'izao tontolo izao dia manome simulation ho fitaovana ifandraisana izay manampy ny olona hahatakatra ny fifandraisan'ny fitoviana ara-poko, ny hanoanana, ny fahantrana ary ny harena.
(Navoaka avy amin'ny: Mofo ho an'izao tontolo izao.)
Inona no atao hoe fanahafana ny simba mianatra ny harena ara-pirazanana?
Ny fanahafana dia fitaovana fifandraisana izay manampy ny olona hahatakatra ny fifandraisan'ny fitoviana ara-poko, ny hanoanana, ny fahantrana ary ny harena. Dingana voalohany tsara ho an'ny olona tsy mahalala ny tsy fitovian'ny rafitra, fitaovana fanampiana ho an'ireo izay maniry ny hahatakatra lalindalina kokoa ny tsy fitoviana eo amin'ny rafitra, ary loharanom-baovao ho an'ireo manam-pahaizana te hahalala ny fiatraikany ara-toekarena azo raisina amin'ny politika tsirairay izay nanitatra ny foko ankehitriny Mizara roa ny hanoanana, ny vola miditra ary ny harena.
Ny fanahafana dia manampy ny olona hahatakatra ny fifandraisan'ny fitoviana ara-poko, ny hanoanana, ny fahantrana ary ny harena.
Amin'ity simulateur ity dia fantatry ny mpandray anjara fa nahatonga ny tsy fitoviana eo amin'ny rafitra ny politika federaly — ny fananana fananana sy ny fanabeazana dia roa monja amin'ireo faritra maro voakasik'izany- sy ny fomba hampitomboan'ny politika ireo hanoanana sy fahantrana amin'ireo vondrom-piarahamonina miloko.
Ny simulation dia mitarika ny mpandray anjara hahatakatra ny antony maha-zava-dehibe ny fitoviana ara-poko mba hampitsaharana ny hanoanana sy ny fahantrana any Etazonia. Ny antenainay dia ny hahitan'ny mpandray anjara amin'ny fahalalàna bebe kokoa ny tsy fitoviana eo amin'ny firafitra, hanohana ireo politika izay manafoana sy / na mampihena ny tsy fitoviana.
Koa satria ny simulation dia manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fitoviana ara-poko, dia mety ho fitaovana mpiara-miasa ho an'ny fiangonana, fikambanana, sampan-draharaha, sekoly ary vondrom-piarahamonina izay nanomboka niasa tamin'ny hazakazaka ary te hahalala bebe kokoa ny anjara asan'ny politikam-bahoaka, rehefa mandeha ny fotoana. , amin'ny famoronana fizarazarana ara-drafitra mifototra amin'ny firazanana.
Inona no vokatr'ilay simulation?
Ento any amin'ny fiarahamonina misy anao ny fanahafana.
Ahoana no fomba fandravahan'ny simulation ireo sakana?
Misy fomba maro firesahana na fiheverana momba ny firazanana. Ny fahatsapana tsy mahazo aina amin'ny lohahevitra dia mety ho sakana amin'ny fanaovana resaka.
Ilaina anefa ireo resaka ireo, indrindra raha hampitsahatra ny hanoanana sy ny fahantrana any Etazonia isika. Izany no antony iray niantso ny mpandray anjara hisafidy kisendrasendra ireo mpandray anjara izay manome azy ireo fiaviana ara-poko izay mety tsy mitovy amin'ny azy manokana. Manampy amin'ny famakiana ny sakana sasany izany.
Tao amin'ny Bread for the Word, dia hitanay fa nanova ny fon'ny olona sy ny sainy ny simulation ary nanentana ny fanahin'izy ireo izy ireo hanjary hanolo-tena hampihatra solomaso fitoviana ara-poko amin'ny asany.
Vonona ny hanomboka? Jereo Mitondra ny fanahafana ny fiaraha-monina misy anao ary mianatra ny fomba.
Ahoana no nahatongavan'ilay simulation ary aiza no azo ampiasana azy?
Ny Simulate Learning Gap Learning Simulation dia ezaka niarahan'ny Bread ho an'izao tontolo izao sy ny NETWORK. Ny foto-kevitra sy ny famolavolana ny simulation dia niara-noforonin'i Marlysa D. Gamblin, manam-pahaizana momba ny politika momba ny hanoanana ara-poko, ny vola miditra ary ny fizarazarana harena. Marlysa dia niara-niasa akaiky tamin'i Emma Tacke sy Catherine Guerrier niaraka tamin'i NETWORK hanamory ny simulation tamin'ny Ecumenical Advocacy Days (EAD) tamin'ny aprily 2017.
Taorian'ilay mpanamory voalohany dia nanokana taona iray manontolo ny Bread hanamoriana ny simulation eny an-tsaha ary hanao fanitsiana mba hahazoana antoka fa manampy amin'ny karazan'olona marobe amin'ny toerana samihafa ny fitaovana.
Ity fitaovana ity dia azo ampiasaina any an-trano, fianarana Baiboly, fiangonana, fivoriambe lehibe kokoa, ary sekoly, ary eo amin'ireo mpiasa tsy mitady tombontsoa, ​​fikambanana mpiaro, mpanome tolotra, masoivohon'ny governemanta, ary orinasa tsy miankina.
Ny fanatrarana ny fitoviana ara-poko dia midika fa ny olona rehetra, na inona na inona firazanana, dia manana fotoana mety hitrandrahana vokatra mitovy.
Raha liana amin'ny fampiasana ny simulate ianao dia jereo Mitondra an'ity amin'ny vondrom-piarahamoninao. Manome antsipiriany bebe kokoa momba ilay simulation ilay horonan-tsary. Mamporisika anao izahay hampiasa ny Torolàlana ho an'ny mpanamora. Ny torolàlana dia manome torohevitra momba ny fanomanana sy ny fanamorana ny simulation amin'ny toerana samihafa. Manana koa isika Torolàlana ho an'ny Facilitator Virtual, raha tsy afaka mihaona mivantana ianao. Raha te hitondra an'io fitaovana io any am-piangonana na amin'ny fianaranao Baiboly ianao dia azafady mba ampidino koa ny Takelaka momba ny asa ara-Baiboly eto ambany.
Te hanamora ny fanahaingoana saika? Ampidino ireto loharano ireto:
Torolàlana ho an'ny Facilitator Virtual NEW
PowerPoint Simulation Virtual NEW
Tracker Action Card NEW
Te hanamora ny fanahafana mivantana? Ampidino ireto loharano ireto:
Kitapo pirinty azo alaina
Torolàlana ho an'ny mpanamora
Takelaka momba ny asa ara-Baiboly
PowerPoint misy teboka miresaka
Famakiana fanampiny momba ny hazakazaka sy ny hanoanana:
Valiny iankinan'ny laharam-pahamehana amin'ny hanoanana mandritra ny COVID-19 sy ny any ankoatry
Fampiharana zana-kazo ara-bola ara-bola ho an'ny fandaharana manohitra ny hanoanana
Tonga any amin'ny Noana Zero: hazakazaka, hanoanana ary fahantrana
Famaranana ny hanoanana amerikana amin'ny alàlan'ny fifantohana amin'ireo vondrom-piarahamonina tena voakasik'izany
Fanagadrana marobe: antony lehibe iray hanoanana
Inona no azoko atao manaraka mba hampiroboroboana ny fitoviana ara-poko sy hialana amin'ny fanavakavaham-bolon-koditra?
Ankehitriny rehefa nahavita ny fanabeazana momba ny harena ara-bolon-koditra ianao, dia misy zavatra maro azonao atao. Voalohany ary ilaina indrindra, izahay dia mamporisika anao hirotsaka amin'ny asan'ny fahatakarana ny fomba famadihana izay nahatonga ny tsy fitoviana ara-pirazanana - fitoviana ara-poko. Ny fitoviana ara-poko dia a dingana izay mifantoka amin'ny fampifantohana ny filàna, ny fitarihana ary ny herin'ny Mainty, Vazimba ary olona hafa miloko, ary koa a tanjona ny fahazoana valiny mitovy, ary farany tsara ho an'ny BIPOC raha oharina amin'ireo namany fotsy. Mandeha mofo.org/racialequity raha te hahalala bebe kokoa momba an'io fe-potoana io dia vakio ny tatitra lehibe hahalalana ny fomba azo ampiharana ny fahamarinana ara-pirazanana amin'ny politika hampitsaharana ny hanoanana sy hiresahana ny fanavakavaham-bolon-koditra, ary hianatra momba ireo fitaovana ilaina hanampiana anao hampiroborobo ny fitoviana ara-poko amin'ny asanao!
Fampianarana sy fiarovana ary fananganana fandriam-pahalemana
Febroary 17, 2021 Vaovao sy hevi-dehibe, Policy 0
Inona no azon'ny mpampianatra atao mba hanatsarana ny toekarena hipoitra aorian'ny areti-mandringana
Howard Richards dia nanolo-kevitra fa tsy maintsy mampianatra ny fomba hivoahana amin'ny areti-mandringana ankehitriny isika, miampy fianjerana ara-toekarena, miaraka amin'ireo toekarena izay mamaly maharitra ny filan'ny olombelona mifanaraka amin'ny natiora. Ny fomba fiasa arosony hanatanterahana an'io fanovana io dia 'fandaminana tsy voafetra.' [tohizo ny famakiana…]